SIFOOYINKA QULQULATADA SII KORDHAYA: BEERITAANKA GEEDO IYO DARYEELKA EE BERRINKA BANNAAN - UBAXA
Platicodone (Shan Shiine ah, Wareegga ballaaran) - Wakiil muddo dheer ah oo ka mid ah qoyska. Ubaxa waa jecel yihiin beeraley badan oo leh nimcadiisa.
Si loo keeno cusboonaansho iyo casriyeynta naqshadeynta goobta ay ku yaal, beeralayda badan waxay rabaan inay bartaan sida si habboon u daryeeli karaan ubaxa barafka.
Ma taqaanaa? Giriig laga soo tarjumay, magaceeda ayaa looga jeedaa "baaquli ballaaran".
Kobcinta cagaarshoowga geedaha
Platicodone waa mid ku habboon yahay sii kordhaya laga bilaabo abuur si geedo, xitaa growers quartey.
Shuruudaha beerashada geedo
Waxaa badanaa lagu dhaqmaa si ay u abuurto miraha dalagyada si toos ah dhulka ugu furan, guga ama xilliga jiilaalka, laakiin waa ammaan in ay koraan geedo kasta. Waqtiga ugu wanaagsan marka aad dhali kartid abuurka platicodone noqon doonaa qeybtii labaad ee February - qeybtii hore ee March.
Diyaarinta daaweynta abuurka
Si aad u diyaariso walxaha beerto, waxaad u baahan tahay inaad ku shubto boorso faashad ah oo ku rid baaquli biyo ah, ka dibna laba maalmood. Inta lagu jiro wakhtigan, waxa ku jira bacda bararka. Ka dib markaa, duufaanta qulqulka abuurka waa diyaar.
Caano iyo awoodda geedo
Wixii geedo sii kordhaya ee dhaqanka ku habboon isku dar ah ciidda guud ee dhirta ubax. Waxay ka kooban yihiin humus, peat iyo ciid oo isku qasan. Ka hor inta aan la saarin abuurka, dhulka waa in la furo.
Waxaad isticmaali kartaa sanduuqyada beeritaanka, dheriyo ballaaran, weel gaar ah oo loogu talagalay geedo iyo weelasha kale ee ku haboon.
Platicodone beeritaanka geedo
Khubarada waxay ku talinayaan 2 habab oo ah beerashada digaagdoonta geedo:
meelaynta tooska ah ee abuurka ah ee dhulka;
ku dhex mara abuurka dhulka si qoto dheer ah 4-5 mm, ka dib markii ay tahay in ay si fudud u rusheeyeen ciid.
Labada hababkaasi waa kuwo la aqbali karo oo lagu faafin karo maaddada "platicodone".
Daryeelka iyo xaaladaha dalagyada
Ka dib beerista, ciidda waa in si taxadar leh loo buufiyaa biyo la dejiyey heerkulka qolka. Marka xigta, qoyi ciidda marka loo baahdo marka lakabka sare uu gebi ahaan qalalan yahay. Weelasha leh jimicsiga ayaa la daboolay filim waxaana loo qaaday qol diiran (heerkulka hawadu waa 20-23 ° C). Caleemaha waxaa la arki doonaa 10-15 maalmood.
Daryeelka geedo of platicodone
Hoyga ayaa laga saaray dalaggii sida ugu dhakhsaha badan caleemaha ugu horeeya u muuqdaan, heerkulna waa la dhimay + 18-21 ° C. Ka dib marka la buufinayo, dhulka waa in la furo. Marka geedo u muuqdaan on 3-4 caleemo, waxay ku dari karaa dheriyo kala duwan (dhexroorka - oo ku saabsan 10 mm), kaas oo geedo ku yaalaan ka hor beerto in dhulka u furan.
Xeebeedka geedo of platycodone ee dhulka u furan
Ka hor inta beerto geedo of platicodone, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado sifooyinka habka this.
Shuruudaha beeritaanka geedo ee dhulka
Platicodone waxaa lagu beeray dhul furan qeybtii labaad ee bisha May - qeybtii koowaad ee bisha June.
Waa muhiim! On sariirta ubax, geedo waa la dhaqaajin karaa sida ugu dhakhsaha badan ma jirto khatar ah ee dhaxan habeen.
Geedku wuxuu jecel yahay meelaha laydhka leh, laakiin wuxuu dareemayaa wanaag wanaagsan oo hoos ah. Ciidda for platycodone waa inay ahaato mid bacrin ah, dabacsan, iyada oo aan xad-dhaaf ah qoyaan iyo u dhow biyaha dhulka, si fiican u miiray. Xulashada ugu fiican waxay noqon kartaa dhoobo isku qasan ciid, qoyaan dhexdhexaad ah.
Ka hor inta beerto, sariirta ubaxa waxay u baahan tahay in la qodo oo lagu daro mitir kasta oo laba jibbaaran oo ciid ah 1 tbsp. l bacriminta qasacadaysan iyo 100-150 g geedka qoryaha.
Geedka geedo ku yaal goobta
Geedo geedo ee platicodone waxaa lagu fuliyaa sida soo socota:
Ka qodee tirada loo baahan yahay ee godadka mugga yar oo ka weyn awoodda geedo.
Geedo badan oo waraabiyo.
Buruqda dhulka ayaa si taxadar leh loogu meeleeyaa godka oo daboolay dhulka.
Qoyso ciidda hoosteeda geedka.
Isugeynta Platycodone leh dhir kale
Platycodone si fiican ayuu u helaa dhirta kale, uma dhaqmo si caddaalad ah sariirta beerta.
Ugu wanaagsan ee la socda:
maro kale oo qarxi ah;
Waxa kale oo ay u egtahay mid cajiib ah oo ka soo horjeeda asalka jibbaarada iyo qoyaanka. Noocyo hooseeya oo ku habboon beeraha dhagaxyada, xuduudaha naqshadeynta iyo weelasha beerta.
Noocyada daryeelka ee jimicsiga ee goobta
Ubax Platicodone waxay u baahan tahay daryeel habboon oo bannaanka u furan.
15ka maalmood ee ugu horreeya ka dib markii laga beerto geedo lagu waraabiyo platicodone maalin walba. Kadibna xaddiga biyaha waa la yareeyey, carrada waxaa la qoyay ugu badnaan 2 jeer toddobaadkii. Ka dib markaad waraabiso waxaad u baahan tahay inaad dabacdo carrada iyo, haddii loo baahdo, weed.
Quudinta iyo caleemaha u dhexeeya saf
Najiinka u dhexeeya safafka lafootoonta leh peat, hay, iyo humus ayaa yarayn doona waqtiga yaraynta dhirta iyo dabacsanaanta ciidda. Mar bishiiba inta lagu jiro xilliga sii kordhaya iyo ubax waxay u qalantaa dalbashada dharka sare ee qaabka wax bacriminta adag ee ubaxyada ubaxyada.
Muuqaal muuqaal ah oo ka mid ah dhirta ayaa ah in ay si xoog leh kor ugu qaadi karto. Sidaa darteed ma lumiso saamaynteeda qurxinta, waxaa si joogta ah loo jaro ama lagu daaweeyaa korriinka korriinka (tusaale ahaan, "Ciyaar"). Waxaad sidoo kale xiri kartaa warshadda wixii taageero ah.
Cayayaanka iyo Cudurada Platycodone
Platicodone waxay leedahay iska caabin fiican oo la xiriirta cudurada iyo cayayaanka. Marmarka qaarkood waxaa laga yaabaa in ay saameeyaan caaryada cawl. Daaweyntu waxay ka kooban tahay dheecaan dheeraad ah oo ka mid ah dhulka sariirta ubaxa, yareynaya waraabinta iyo ka qaadista tijaabada. Ubaxyada soo haray waxaa lagu buufin karaa fungicide qaar. Nooca ugu badan ee loo isticmaalo sulphate, "Fundazol" (2% xal), "Topsin-M" (1% xal). Dalbo qiyaasta lagu talinayo soo saaraha daroogada. Haddii 7-10 maalmood ka dib daaweynta ka dib calaamadaha kalluunka casaanka ah weli waa la ogaan karaa, habsocodka waa in lagu celiyo.
Cadaadiska ugu weyn ee platicodone wuxuu noqon karaa jiir iyo jiir kuwaas oo dhaawici doona rhizomes ee geedka. Habka ugu waxtarka leh ee wax looga qaban karo cayayaanka ayaa leh kiimikooyin gaar ah (waxay ku seexdaan godadka, lowska leh sunta ayaa la dhigayaa), noocyo badan oo laga heli karo dukaamada beerka.
Goorta la ururiyo iyo sida loo kaydiyo abuurka ah ee platicodone
Marka sanduuqa gudaha ubaxa la dillaaco, iyo pedicel gebi ahaanba qalalan yihiin, miraha kaabashodoon ayaa bislaaday oo diyaar u ah in la goosto. Caadi ahaan waxaa la ururiyaa bisha Sebtembar waxaana lagu kaydiyaa qolal qallalan, oo aan ka dheereyn 1-2 sano. Si aad tan u sameyso, waxaad isticmaali kartaa bacaha dijitaalka ah, dhalooyinka ama dhalooyinka duuban, bacaha warqadda kraftiga.
Ma taqaanaa? Seeds of noocyo kala duwan ururiyey on qaabka, marka isku dhafan, siin kara mid cusub, oo aan caadi ahayn.
Diyaarinta Platicodone ee Jiilaalka
Platicodone marka beerashada beerta u baahan tahay diyaarinta saxda ah ee jiilaalka.
Ka hor inta bilawga ah ee cimilada qabow, qaybta dhulka oo dhan waa in la gooyaa, oo ka baxo oo keliya xididada, dhulka waa in lagu daboolaa caleemo dhacday, peat, hay, balka, khudradda ama waxyaabaha kale ee ka jira beerta.
Korniinka dufan ee dheriga
Warshadu waxay ku haboon tahay oo kaliya in la beero beerta, laakiin sidoo kale loogu talagalay taranta guryaha aqalka ama magaalada. Xaaladdan oo kale, platicodone waxaa ugu wanaagsan koritaanka abuurka sida geedo for dhul furan.
Platicodon dheriga ku riday xayawaanka daaqad iftiin leh, laakiin haddii ay lagama maarmaan pritenyuyut, sida laga soo jeeda cadarka qorraxda tooska ah ayaa gubi kara. Heerkulka heerkulka ugu wanaagsan ee loogu talagalay xakamaynta guriga waa 20 ° C.
Ubax waa in laga saaro isla markiiba, oo ciidda waa in la furfuraa waqti ka waqti. Ubax dheriga ah uma dulqaadanayo qoyaan xad dhaaf ah iyo qoyaan badan, sidaa darteedna u baahan yahay waraabin dhexdhexaad ah, xilliga qaboobaha - ugu yaraan. Sidoo kale waqtigan, warshadda waxaa loo wareejiyaa qol qabow (13-15 ° C).
Waa muhiim! Qadarka biyaha ee dheriga xilliga qaboobaha ayaa la jaraa.
Daadi geedka lagama maarmaan. Ka hor inta muuqaalka bluebells, waa suurad wacan in ay ku quudiyaan dhaqanka bacriminta macdanta dhirta ubaxyada. Laga soo bilaabo Sebtembar, caleenta ubaxu wuxuu si tartiib tartiib ah u beddelaa midabkiisa cagaaran ilaa jaale, iyo platicodone waxay haysaa muuqaal qurxoon. Guga geedka ka baxsan wuxuu u baahan yahay xubin.
Waxaan ka helaynaa noocyo caan ah oo ka mid ah raspberries dayactir
Royal Delonix: Xeerarka koritaanka geed dab ka kaco
Sharaxaad ka mid ah noocyada qaar ka mid ah batun basasha
Maqaalkani waxaa loogu talagalay beeraleyda doonaya in ay bedelaan "sovdepovsky" mini-cagaftii hore ee cusub, iyo sidoo kale milkiilayaasha mashquuliya inay doortaan qalabka ugu haboon ee goobta. Waxaan kuu soo bandhigi doonaa gawaarida yaryar, waxay kuu sheegi doonaan sida loo doorto qalab wax-tarjaran oo badan si loo siiyo, qoro dhammaan khayraadka iyo khasaarooyinka farsamadan oo ku baraya sida loo isticmaalo si sax ah. Read More
Quruxda iyo dhadhanka dhadhanka midba kan kale - sharaxaad ka kooban yaanyo kala duwan "Kibits"
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Ubaxa 2020